Kevin de Bruyne Oo Isbarbar Dhigay Murugadii Liverpool Ee Koobka Premier league Iyo Musiibadii Ay Kooxdiisa City Uga Hadhay Champions League. - Gool24.Net
Kevin de Bruyne Oo Isbarbar Dhigay Murugadii Liverpool Ee Koobka Premier league Iyo Musiibadii Ay Kooxdiisa City Uga Hadhay Champions League.
Xidiga kooxda Man City ee Kevin de Bruyne ayaa ku dooday in ayna wax murugo ah la dareemayn Liverpool sababtoo ah in ayna jirin cid iyaga la dareentay musiibadii Champions League.
Kevin de Bruyne ayaa tilmaamay in wax kaliya ee ay Liverpool kaga guulaysteen ay ahayd maskax guulaysigii uu Guardiola kooxdooda u abuuray iyo in ay dhamaadkii xili ciyaareedka ka fiicnaadeen Reds.
Kevin de Bruyne ayaa si cad u sheegay in ayna wax murugo ah la dareemayn kooxda Liverpool maadaama oo ay iyaguba soo mareen daqiiqihii waalida ahaa ee dhamaadkii kulankii Tottenham ee ay Champions League uga hadheen.
Man City ayaa loo arkay in ay daqiiqadii ugu danbaysay ee kulankii Tottenham ay u soo baxday afar dhamaadkii Champions League balse markii uu dabaal degoodii waalida ahaa dhamaaday waxaa goolkii Sterling lagu diiday VAR.
Kevin de Bruyne oo ka halaya tartankii Premier League ayaa yidhi: ” Waxa uu ahaa dadaal xusuus leh oo ka yimid (Liverpool) laakiin waxay la micno tahay in kaliya aanu iyaga ka fiicnaanay dhamaadkii”.
Laakiin Kevin de Bruyne ayaan wax murugo ah la dareemayn qaabkii ay Liverpool hal dhibic ugu wayday koobkan wuxuuna yidhi: “Anigu murugo lama dareemayo iyaga, sababtoo ah, anigu ma filayo in ay murugo nala dareemi lahaayeen iyaguba”.
Laakiin Kevin de Bruyne oo xaaladii Liverpool barbar dhigaya qaabkii ay Champions League kooxdiisa uga hadhay ayaa yidhi: “Ma filayo in ay cidna murugo nagula dareentay qaabkii aanu uga hadhnay Champions League. Waad qaadanaysaa”.
Laakiin De Bruyne ayaa garanaya xanuunka ay Liverpool arintani ku leedahay wuxuuna yidhi: “Anigu waan garanayaa sida ay iyaga ula dareen tahay, sababtoo ah waad niyad jabaysaa. Si la mid ah ayaanu dareemi lahayn haddii ay nagu dhici lahayd anaga”.
“Laakiin wali tartamayaal ayaanu nahay. Waxaanu doonaynaa in aanu samayno inta badan ee ay sameeyaan, laakiin waxaan fahansanahay dareenka ay iyagu qabaan. Waa aragtida guud ee ciyaaraha”.
“Haddii aad ciyaarto Sportska shaqsi ah, waa naftaada, marka ay kooxdaada tahay, waa kooxdaada. Dagaal wayn ayuu ahaa, laakiin in aanu iyaga la dareeno murugo aad ayay u yara fog tahay” ayuu De Bruyne hadalkiisa raaciyay.
Kevin de Bruyne iyo kooxdiisa Man City ayaa isku diyaarinaya finalka Wembley Stadium ee FA Cupka oo ay la ciyaarayaan Watford iyada oo Guardiola uu doonayo in uu saddexda koob ee England isku darsado.
Laakiin Liverpool ayaa doonaysa in ay saddexda koob ee Man City ku qariso koobka UEFA Champions league kaas oo hadda noqday min qiyaaska ugu wayn ee kooxaha Yurub.